Izimvo zokunika ubugcisa ngeKrisimesi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJudit Murcia | | Ukuphefumlelwa
Rhoqo ngeKrisimesi sinoluhlu lwabantu esinokuthi sibanike, kwaye oko kukuthi ukungabinamali de cabeza. Ukuthenga abathengi kusikhuthaza ukuba sithenge unyaka wonke, Iitemos de yonke into. Umbono olungileyo ngulo nika ubugcisa.
Sisiphi isipho endingasenaso? Ndingaba yintsusa njani? Ukuba u khangela isipho eyahlukileyo, kwaye ufuna ukumangaliswa nge isipho yokudala Sikucebisa ukuba unike ubugcisa. Nikeza ubugcisa? Kuvakala kunzima, kodwa siyakuqinisekisa ukuba kukho uluhlu olubanzi lokukhetha kuthi ukukhuthaza inkcubeko kunye nobugcisa kule Krismesi.
1 Izipho zeengqondo zokuyila
2 Fumanisa iPhephaThrophy
3 Amanqaku e-Aqua
4 Amatikiti emiboniso yobugcisa
5 Imifanekiso yesiqhelo
6 Amaphepha obugcisa
7 Imisebenzi yezandla
Izipho zeengqondo zokuyila
Ukuba isipho sethu sijolise ku uyilo lomntuNjengomthandi wobugcisa, umsebenzi wakhe umenza asebenze njengombhengezi, umzobi wegraphic, ukufota, ungalahli ithemba kuba zininzi iindlela onokukhetha kuzo Yothuka. Kukho iindlela ezizodwa ezizodwa kunye nobuchule oza kuzithanda.
Siqinisekile ukuba emva kokubona izimvo esizilungiselele wena, uya kubathanda nabo. Qaphela!
IPhephaThrophy Yiyo Uphawu lwaseJamani Inikezelwe ekubuyiseleni kwakhona i iintloko zezilwanyana ezixhonywe njengendebe, kodwa kule meko yenziwe nge papel. Le yimifanekiso eqingqiweyo yobungakanani bobomi, ukongeza ekubeni ngu ibango lentlalontle, Izinto zayo zinemvelo ngokupheleleyo kuba iqinisekisiwe yi-FSC njenge eco-friendly. I-FSC ngumbutho wamazwe aphesheya ojonga imeko-bume kunye neenkampani eziqinisekisayo ezithobela ngokwenene iparameter yendalo.
Umakhi wolu phawu uzimisele ukufumana uyilo olufanelekileyo ukuze abenalo ekhaya kwaye akwazi ukulibona yonke imihla kwaye angadinwa. Ndifuna ukufumana ibhalansi kunye nokwenza uyilo lwangoku. Kule meko, iimilo zetyhubhu ezincinci bafezekisa zonke iinjongo zabo. Zibonisa ukulula ngelixa ziqaqambisa ubuhle.
Los Uyilo lweentloko zezilwanyana, ngendlela yeembasa ezixhonywe eludongeni; kunye namanani amileyo. Ziyilelwe eBerlin, eJamani nase ukusikwa komatshini kunye nokusongwa kwangaphambili kwiphepha elinobuhlobo umgangatho ophezulu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iphepha ngalinye liza kutshekishwa nganye nganye, ngesandla ukuqinisekisa ukuba kuphela ziimodeli ezisikiweyo kwaye zisongwe ngokugqibeleleyo. Xa bedlulisa oku ulawulo, que ngokusesikweni ukutywina nguPapertrophy.
Ungavumeli ukuphefumlelwa kukubambe ungalindelanga! Esi sipho si iinkcukacha iyahlekisa kakhulu ukuba ungayinika abantu bokudala. Yi Incwadana engenamanzi ukuze ubhale kuzo kwaye ungazonakalisi. Eli phepha alinyibiliki xa lifakwe emanzini. Icala elisezantsi kuphela kukuba bafuna ukusetyenziswa kwepen, ipensile okanye isiphawuli esisigxina.
Amatikiti emiboniso yobugcisa
Sisebenzise ngakumbi ukunika amatikiti okuya kwindawo yemidlalo yeqonga okanye kwimiboniso yazo zonke iintlobo. Kwelinye icala, bambalwa abantu abanikezela ngamatikiti imiboniso yobugcisa, iimyuziyam okanye imisitho yoyilo. Sicebisa ukuba ujonge kwisixeko sakho okanye kwindawo engqongileyo Uya kumangaliswa yiyo yonke intengiso ekhoyo!
Ukuba uhlala kwisixeko esikhulu, kuya kuba lula ukufumana ezi ntlobo zemisebenzi. Kukho indawo enomdla kakhulu eMadrid, Barcelona naseSeville. Imalunga nayo CaixaForum. Ngumsebenzi wentlalontle kaLa Caixa ozinikele ekunikezeleni ngeendlela ezahlukeneyo ze imiboniso, iintetho kunye nemisebenzi yosapho.
Unokujonga kwakhona kwinto eqhelekileyo iwebhusayithi yeziganeko njengaye uphawu lokukhusela, apho ine icandelo lobugcisa Ngokuqinisekileyo uya kufumana into enomdla. Ukuba awazi isikhokelo sokuzonwabisa, jonga kuba iye izindululo kuzo zonke izixeko ze España.
Ngaba ukhe wacinga ngokunika imizekeliso? Ngokuqinisekileyo wakha wafuna ukwenza into ethe kratya yobuqu kwaye ugqibile ukushicilela ifoto eyenziwe kwisakhelo sefoto esihle. Qhubeka, sicebisa ukuba u-odole enye umzekeliso wesiko. Kumfanekiso sinokubona umzekeliso wesiko ngu @hey_yuddies.
Zininzi iindlela ezahlukeneyo kwaye kufuneka ufumane obona bufanelana nobuntu bakho okanye nomntu oza kumnika yena. Umzekelo, sinokukhetha isitayile esinye -yinyani kwelinye icala, umntwana. Nawe unokwenjenjalo nciphisa uphando lwakho ngohlahlo-lwabiwo mali oceba ukuyityala. Unokwenza ifayile ye- caricature, esikufutshane nesitayile esihlekisayo, okanye isitayile esingaphezulu -yinyani.
Ukuba awazi ukuba uqale ngaphi fumana, Sishiya ezinye iiprofayili ze Instagram abazinikeleyo ekwenzeni olu hlobo lwe imiyalelo:
Ine a Uhlobo olusebenzayo oludityanisiweyo kunye uyilo olusicaba, uyintombazana encinci, usebenza nzima kwaye unemincili ngomsebenzi wakhe. Ukuba ufuna ukubona umsebenzi wakhe, ungathandabuzi ukutyelela iprofayile yakhe ye-Instagram yile: @kweenkanye
Esinye isitayile esahluke ngokupheleleyo kwesangaphambili yile @iamfanlalisa
Ukuba ujonga isitayile esikufutshane umzobo, le ntombazana inesimbo esinokusikhumbuza ngemanga. Igama lakhe ngu Yolanda iminyaka kwaye ungamfumana kwi-Instagram njengo @lolan
Ngoncedo lwe imifudlana kunye nezixhobo zedijithali, @iamfanlalisa yenza amashiti amnandi ngokwenene ukunika. Ndwendwela iprofayile yakhe ye-Instagram kwaye ufumane okungakumbi ngaye.
Olunye ukhetho olusebenzayo kukuba fumana umzobi umthengele ibe nye ukuyila ifilimu. Okwangoku, i-Intanethi iyasivumela ukuba sifumane iwebhusayithi ezininzi apho sinokuthenga khona imizobo kunye nokuprinta ngokuthe ngqo kumzobi wethu, ngaphandle kwabalamli. Kuya kusiba yinto eqhelekileyo kumculi ngamnye ukuba abe isitoreji, nangona zikho eCommerce ezinceda amagcisa fumana ukubonakala.
Oléartngu- Portal Iqhutywa ngabantu abathathu: USergio, uBaptist noRaquel. Aba ngabasebenzi bezentengiso abagqibe ekubeni baphucule iprojekthi yezobugcisa, enye yezinto abazithandayo. Baxhasa oosomashishini abancinci baseSpainOkwangoku inenani elipheleleyo le- Amagcisa ali-15 abasebenzisana nabo.
Owu Là L'art, igalari yezobugcisa ekwi-intanethi. Yenziwe ngoosomashishini ababini abavela eBarcelona abathanda ubugcisa. Bazinikele ekukhetheni nasekukhuthazeni amagcisa asakhasayo. Ngokusebenzisa u-Facebook unokulandela iindaba zabo kwaye ufumane amagcisa amatsha.
Ezinye iiarhente zoyilo zinevenkile yazo ekwi-intanethi apho ungathenga khona izinto ezahlukeneyo zobugcisa. Ityala elinye lelo Hee studio. Imalunga ne- isifundo sobuchule eyaziwa kwilizwe jikelele ezinze e Barcelona. Bakhethekileyo kuyilo lwegraphic kunye neeprojekthi zemizekelo.
Nabani na onika ubugcisa unika inkcubeko. Ziziqwenga kunye nexabiso elongeziweyo elihambisa iimvakalelo ezininzi, iikhonsepthi kunye namabali. Gcina ukhumbula ukuba unokufumana ubugcisa beendlela ezahlukeneyo, oko kukuthi, ukusetyenziswa kwefayile upende, la mze keliso, la Iiserigraphy okanye umbono, phakathi kwabanye.
Tyelela i yentengiso okanye efanelekileyo isinika ithuba lokufumana izipho ezahlukeneyo yenziwe ngesandla. Phakathi kokunikezelwa kwayo kukho iiseramikhi, ubucwebe, ubugcisa, izinto zokubhala, kunye nezinto ezahlukeneyo zezinto. Inkqubo ye- iivenkile ezincinci ngexabiso elongeziweyo kwaye ngaphezulu kwako konke, uyakuyiqaphela umgangatho weemveliso zakho.
Yokuphela ngokuchasene nento esinokuyifumana, ngaphandle kokuthathela ingqalelo ukuba amaxabiso anokuba phezulu ngandlela thile ubunzima bokufikelela ezi mveliso, oko kukuthi, kunzima ukudibana nabenzi bezobugcisa kwaye kusinyanzela ukuba siye kuziyela ngokwethu ukuya kuzithenga kwimiboniso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Izimvo zokunika ubugcisa ngeKrisimesi